အမေးအဖြေ ရှင်းလင်းချက် -> CWM နှင့် Custom Rom ဆိုတာဘာလဲ? ~ ကော်ပီဆရာကြီး
အမေးအဖြေ ရှင်းလင်းချက် -> CWM နှင့် Custom Rom ဆိုတာဘာလဲ?
10:30 AM နည်းပညာများ 1 comment
ဒီညီလေး မေးသွားတာက တော်တော်များများ Mobile User များ
နားလည်ရခက်တဲ့ ပုံစံပါ ကျနော်လဲ နားလည်သလောက်လေး တဆင့်ခြင်း
Stock Recovery ဆိုတာ Android ဖုန်းတစ်လုံးမှာ မူလ အတိုင်း ပါဝင်လာတဲ့ Recovery တစ်ခုပါ
အောက်က ပုံမှာ ပြသထားပါတယ် မူလ Recovery ကို Stock Recovery လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဘာတွေ ပါဝင်မလဲဆိုတာကလဲ ရှင်းရှင်းလေးပါ
ဒါတွေပါပဲ ထူးထူးခြားခြား အသုံးဝင်တာ နှစ်ခုပဲရှိတယ်
Official Update.zip ဖိုင် ဒေါင်းပြီးရင် SD Card ထဲထည့်
Apply Update From SD Card ကနေတဆင့်
Password တွေ ချမိရင်တော့ Wipe Data/Factory Reset ကိုဝင်ပြီး
Yes To All လုပ်ယုံနဲ့ ဖုန်းက အသစ်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။
Stock Recovery လို့ခေါ်တဲ့ မူလ Recovery ကိုသိပြီဆိုရင်
ပြန်လည် အသစ်ထည့်သွင်းတဲ့ CWM Recovery အကြောင်းကို ရှင်းပြပါမယ်။
CWM ( Clock Work Mod ) Recovery
Clock Work Mod Recovery ကို အများအားဖြင့်
CWM လို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်...။
အောက်ပါပုံကတော့ CWM Recovery ဖြစ်ပါတယ်။
မူလ Stock recovery ကို အုပ်ပြီး အသစ်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ CWM Recovery ရဲ့
ဒီမှာ ထူးခြားစွာ ပါဝင်နေတာလေးတွေကို ကျနော် အနီရောင်တားပေးထားပါတယ်။
Install Zip From SD Card ကတော့
ကျနော်တို့ Root ချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကနေ
Root.zip ဖိုင်တွေကို Install လုပ်ပေးယုံဖြင့်
Super User ရရှိနိုင်သလို
MM Font.zip ဖိုင်တွေကို လဲ Install Zip From SD Card ကနေ
Install လုပ်ရုံဖြင့် မြန်မာစာကို မ Root ပဲ မြင်နိုင်ရေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ Backup and Restore ဖြစ်ပြီး
မိမိ တစ်ခုခု မစမ်းသက်ခင် မိမိရဲ့ Firmware ခေါ် Rom ကို
Firmware ပျက်သွားပြီး Logo မှာ ရပ်နေသည့်အခါမျိုးတွင်
Backup မှ သိမ်းထားသော Firmware သို့မဟုတ် Rom အား
Restore ပြန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိသိမ်းဆည်းသည့်အချိန်က
မူလ အတိုင်းကို ပြန်လည်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ မေးထားတဲ့ ညီလေး သိချင်တဲ့
CWM Recovery တွေ ဘယ်မှာ ရှာလို့ရမလဲဆိုတော့
မှာ Download ဆွဲပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်....
Stock Rom ဆိုတာကတော့ မူလ ဖုန်းရဲ့ ပင်ရင်း Firmware ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်
Firmware လို့ ခေါ်ဆိုကြသလို Stock Rom လို့လဲ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
Custom Rom ဆိုတာကတော့ မူလ ဖုန်းမှာပါတဲ့ ပင်ရင်း Firmware မဟုတ်ပဲ
Dev များစိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ချယ်သထားသော Theme များ Launcher များနှင့်
အခြားသော အသုံးဝင် App များ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော
Rom များကို Custom Rom ဟု ခေါ်ပါသည်။
ဒီအကြောင်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်၍ အကျယ်တ၀င့်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်
တွင် လေ့လာတာ အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။
mg la wom January 8, 2014 at 9:02 AM
အကိုရေ huawei 220-t10 ရဲ့cwm recovery .pac ဖိုင်လေးတင်ပေးပါလား
firmware တစ်ခုလုံးကို download ဆွဲဖို့ 
connection မကောင်းလို့ ပါ
cwm recovery .pac တစ်ခုတည်းဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ ကျန်တာတွေက ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိပါတယ် အားကိုးလျက်
ခုဖော်ပြမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ lenovo tab A2207A-H ကို firmware ပြန်တင်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးပါဖြစ်ပါတယ်။ တင်နည်းလေးကတော့ မခက်ပါဘူး ဒါပေမဲ...
Android Tablets Ics ကို Root နည်း
Android Tablets ics ကို Root ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ zip ဖိုင်လေးကိုအရင် Download ဆွဲလိုက်ကြရအောင်… Download Ta...
Lenovo A789 Firmware
Lenovo A789 ၏ Official Firmware ဖြစ်ပါတယ် အောက်ပါ Link များတွင် Download ဆွဲပါ။ Download Firmware Download Drive r ...
Playstore ကို Computer ကနေ Download လုပ်မယ်
တင်ပေးမလို့လုပ်နေတာကြာပါပြီ။ပုံတွေလုပ်ရမှာပျင်းနေတာနဲ့မတင်ဖြစ်တာပါ။ အားလုံးအလွယ်တကူပဲအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။စလိုက်ရအောင် ကဲလိုတဲ့ File လေးတွေစဆွ...
ဒီ Root လေးကတော့ ခုနောက်ဆုံး ဖန်တီးလိုက်တဲ့ bat ဖိုင်လေးပါ။ Sony Xperia Z, Xperia V jellybean တွေ အထိရပါတယ်။ အသုံးပြုပုံလေးကလည်းလွယ်...
ဒီညီလေး မေးသွားတာက တော်တော်များများ Mobile User များ နားလည်ရခက်တဲ့ ပုံစံပါ ကျနော်လဲ နားလည်သလောက်လေး တဆင့်ခြင်း ရှင်းပြပေးကြည့်ပါမယ်....
iPhone မှာ Lock / Unlock ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
iPhone မှာ Lock / Unlock ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဆိုပြီး အီးမေးထဲကို တစ်ယောက်က မေးလာပါတယ်.. ကျွန်တော် iPhone နဲ့ပတ်သက်လို့ တော်တော် မသိတာပါ.....
How to use Riff Box for first User
ဒီ Post လေးကို မရေးခင် Riff Box ရဲ့ အသုံးဝင် ပုံလေးကို အရင် ပြောကြရအောင်။ Android ဖုန်း အတော်များများဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Dead လို့ ခေါ်တဲ့ Power...
အသစ်ထွက်လာတဲ့ Android ဖုန်းနှင့် Tablet တွေမှာအသုံးများတဲ့ - Viber APK 9.6.5.1 Apk - ဒီနေ့တွက်လာ Android ဖုန်း tablet တွေအသုံးများနေတဲ့ Viber Version သစ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဒီနေ့ထွက်တာပဲရှိသေပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ...
Windows 10 နှင့် Windows 8 အတွက် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်နဲ့ ဖောင့် 32/64 bit - 1.Windows 8 နှင့်အထက် Windows 10 တို့မှာ Zawgyi နေရာတိုင်းအဆင်မပြေတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ 2.ကီးဘုတ်ကို 32 နဲ့ 64 မိမိ system bit အတိုင်းနှိပ်သွင်းပေးပါ 3.Font န...
V-Root 1.7.0 New Update!
iTools 2013 New Update!
Samsung Galaxy S Duos (GT-S7562) Official Firmware...
Huawei Y Series Official Firewares
Bluebo i9300 (L100) MTK6577 (Firmware)
Sunup OK777 Firmware and Tool - MTK/SPD
HTC Desire VC (Firmware)
HTC Incredible (Firmware)
HTC ONE X (Firmware) 4.2.2
Samsung Galaxy Note2Offical 4.3 Firmware
Samsung Galaxy S IV Official Firmware 4.3 (သစ်လေး)...